सावधान पेट्रोल पम्पले ठग्न सक्छन्, यी ८ कुरामा ध्यान दिनुस्
पेट्रोल पम्पहरुबाट लगाइने पेट्रोल वा डिजेल तिरेको रकम अनुसार पाइँदैन, कम परिमाणमा पाइन्छ, ठगी हुन्छ वा मिसावटको समस्या हुन्छ भन्ने जस्ता अनेकन गुनासाहरु बारम्बार आउने गर्छन् । यही अभियोगमा पेट्रोल पम्प सञ्चालकहर बेलाबखत प्रहरीको फन्दामा समेत परिसकेका छन् । यस्ता गुनासा स्वभाविक पनि हुन्,
किनभने पेट्रोल भर्दा धेरै मानिस ठगीको शिकारमा पर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा ठगी हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी, सामान्य थपघट त भइहाल्छ नि भनेर छाडिदिन्छौ । तर एक सचेत ग्राहकका लागि यो ठीक होइन । उसोभए के छ त उपाय ? आउनोस् हामी तपाईंलाई पेट्रोल पम्पहरुको ठगीबाट जोगिने केही टिप्सहरु बताइदिन्छौं ।
डिजिटल मिटर भएको ठाउँबाट मात्र तेल भर्ने
पेट्रोल भर्दा सधैं डिजीटल मिटर भएको पम्पबाट मात्र भर्ने गर्नुहोस् । म्यानुअल प्रणालीको पेट्रोल पम्पबाट बढी ठगी हुने अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । यस्ता मेसिनबाट हुने ठगीबारे न तपाईलाई थाहा हुन्छ, न तपाईंले ठगी भयो भनेर दाबी गर्ने आधार नै हुन्छ । यही कारण पछिल्लो समय नेपालका पुराना पेट्रोल पम्प मेसिनहरु हटाउन थालिएको छ । धेरैमा डिजिटल मिटरवाला पम्प लगाउन थालिएको छ ।
मिटर पटक–पटक रोकिनु शंकास्पद
तपाईंले पनि देखेको हुनुपर्छ कि पेट्रोल भर्ने समयमा कहिलेकाहिं मिटर पटक–पटक रोकिने गर्छ । पटक–पटक रोक्दै तपाईलाई पेट्रोल दिइने गरिन्छ भने त्यो पम्प सही हालतमा नहुन सक्छ । जानकारहरुका अनुसार मिटर पटक–पटक रोकिँदा तपाईले कम तेल पाउनुहुन्छ, यो एकप्रकारको ठगी हो । यसकारण कुनै पेट्रोलपम्पमा यस्तो मेसिन छ भने त्यहाँबाट तेल नभर्नु नै जाति हुन्छ । बरु यो विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएर अरुलाई समेत ठगीको शिकार हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।
मिटरबाट ध्यान नहटाउने
अधिकांश मानिस आफ्नो कार तथा मोटरसाइकलमा पेट्रोल भरिरहँदा मिटरतर्फ ध्यान दिंदैनन् । कतिपय त कारभित्रै बस्छन् र पेट्रोल पम्पका कर्मचारीलाई विश्वास गरेर इन्धन भर्छन् । तर यस्तो बानी गलत हो । तपाईको यस्तो बेवास्ताको फाइदा पेट्रोलपम्पवालाहरुले उठाउने गर्छन् । त्यसकारण पेट्रोल भर्ने समयमा ध्यान पम्पको मिटरतिर राख्नैपर्छ । यति सानो सावधानीले पनि पेट्रोलपम्पबाट ठगिने संभावना निकै कम हुन्छ ।
के मिटरमा जिरो छ ?
कतिपय अवस्थामा तपाईलाई भुलाएर पेट्रोलपम्पकर्मीले मिटरमा तेलको परिमाणमा जिरो त देखाउँछन्, तर मूल्यमा चाहि अघि जिरो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तपाई सजिलै ठगीमा पर्न सक्नुहुन्छ । यसकारण, आफूूले पाएको पेट्रोल परिमाणसँगै मूल्यतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । परिमाण र मूल्यतर्फ पेट्रोल लाउनुुअघि जिरो हुनैपर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जुन पेट्रोल पम्पमा पहिला नै तपाईले माग गरे अनुसारको पेट्रोल परिमाण र रकम समेत सेट गरेर पेटोल भरिन्छ, त्यहाँबाट ठगी हुने संभावना निकै कम हुन्छ ।
रिडिङ स्टार्टमा ध्यान दिने
पेट्रोल पम्पको मेसिनमा जिरो अंकमा तपाईंले ध्यान दिनुभयो, तर रिडिङ स्टार्ट कसरी भइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुुभएन भने पनि ठगीमा पर्न सकिन्छ । जस्तै, मिटर रिडिङ स्टार्ट सिधै १०, १५ वा २० बाट हुन्छ भने त्यो ठगी हो । मिटर रिडिङ कमसेकम ३ बाट स्टार्ट हुनुुपर्छ, ३ भन्दा बढीले जम्प भयो भने त्यहाँ ठगी भइरहेको बुुझ्नुपर्छ । ३ भन्दा बढी अंकले जति रिडिङ स्टार्ट जम्प हुन्छ, तपाईले त्यति नै थोरै तेल पाउने संभावना बढी हुन्छ ।
कतै मिटर तीव्र गतिमा चलेको त छैन ?
पेट्रोल भरिरहँदा मेसिन तीव्र गतिमा चलेमा त्यो सामान्य अवस्था होइन । केही न केही गडबडी भइरहेको छ । यस्तो बेला पेट्रोलपम्पकर्मीलाई मिटरको स्पीड नर्मल गर्न लगाउनुपर्छ । तेज गतिमा मिटर चल्दा तपाईले तिरेको मूल्य अनुसार पेट्रोल नपाइरहेको हुनसक्छ ।
सुनसान पेट्रोल पम्पबाट तेल नभर्ने
सुनसान पेट्रोल पम्पबाट तेल नभर्नुहोस् । मानिसहरुको चहलपहल भइरहने वा तपाई भन्दा अगाडि केही मानिसहरु पेट्रोल भर्न बसिरहेका छन् भने त्यस्ता पम्पबाट मात्र तेल भर्ने गर्नुुहोस् । सुनसान पेट्रोल पम्पबाट तेल भर्न सधैं सजग हुनुुपर्छ । यदि यस्तो पम्पबाट तेल भर्नुुहुन्छ भने तपाईलाई कम पेट्रोल प्राप्त हुन्छ । किनभने यस्तो पेट्रोल पम्पबाट तेल भर्दा नोजलमा पेट्रोल आउनुुभन्दा अघि भरिएको हावा तपाईको गाडीको ट्यांकीमा भरिन्छ र तपाईलाई केही प्वाइन्टको नोक्सानी हुन्छ ।
खाली ट्यांकी पारेर तेल नभरौं
धेरै कम मानिसलाई मात्र थाहा हुन्छ कि खालि ट्याङ्कीमा पेट्रोल भर्दा पनि नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा । तपाईको पेट्रोल ट्याङ्क जति खालि हुन्छ, त्यति नै हावा ट्याङ्कीमा भरिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले पेट्रोल भर्नुहुन्छ भने हावाका कारण पेट्रोलको परिमाण कम पाइन्छ । त्यसकारण ट्याङ्कीमा रहेको पेट्रोल रिजर्बको तहसम्म आउन नदिई त्यसअघि नै पेट्रोल भर्नुपर्छ ।
हुण्डाई क्रेटालाई टक्कर दिन आउँदैछ फोर्डको एसयूभी
फोर्डले टेरिटोरी नामक नयाँ कम्प्याक्ट एसयूभी सार्वजनिक गरेको छ । विशेष गरी चिनिया बजारलाई लक्ष्यित गरी ल्याइने सो एसयूभी सन् २०१९ देखि चाइनिज बजारमा उपलब्ध हुनेछ । फोर्डको हाल प्रचलित इकोस्पोर्ट भन्दा यो माथिल्लो रेन्जमा हुनेछ । यसको प्रतिस्पर्धा हुन्डाई क्रेटासँग हुनेछ । जेएम कर्पोरेसनसँग मिलेर फोर्डले टेरिटोरी एसयूभीको निर्माण गरेको हो ।
फोर्ड टेरिटोरीमा अघिल्लो भागमा क्रोमयुक्त ग्रिल छ । यसको दुवैतिर होरिजन्टल हेडल्याम्प्स छन् । साइडको भागमा ध्यान दिएर हेर्दा फराकिलो ह्विल आर्क र सार्प कर्भ लाइन उपलब्ध छ । क्याबिन पनि प्रिमियम छ । यसको सेन्टरमा ठूलो इनफोटेनमेन्ट स्क्रिन छ । स्क्रिनको तल्लो भागमा फोर्डको मस्ट्याङ जस्तै टोगल स्विच कन्ट्रोल छ ।
यसमा ड्राइभर असिष्टेन्स टेक्नोलोजी (डीएटी), एडेप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल र प्रि–कोलिजन असिष्ट जस्ता फिचर पनि उपलब्ध छन् । विशेष गरी युवा ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर यसको निर्माण गरिएको बताइएको छ । चीनमा यो पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड र प्लग–इन हाइब्रिड गरी तीन इन्जिनमा उपलब्ध हुनेछ ।
पेट्रोल र माइल्ड हाइब्रिड भर्सनमा १.५ लिटर पेट्रोल इन्जिन हुनेछ, जसले १६३ पीएस पावर र २५० एनएम टर्क प्रदान गर्नेछ । यसमा ६–स्पिड एएमटी गियरबक्स हुनेछ । चीनको लागि मात्र निर्माण गरिएकोले यो गाडी भारतमा भने उपलब्ध हुने छैन । भारतमा उपलब्ध नभए नेपालमा पनि उपलब्ध हुने सम्भावना कमै हुन्छ ।
भारतमा भने फोर्ड र महिन्द्रा मिलेर छिट्टै नै नयाँ एसयूभी बजारमा ल्याउने योजना बनाएका छन् । यसको प्रतिस्पर्धा हुन्डाई क्रेटा र जिप कम्पाससँग हुनेछ । यद्यपि यसको नाम के हुनेछ, अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कारमा एसी बचाउने तरिका
गर्मी मौसममा कार भित्र गुम्सेर यात्रा गर्न सहज हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा जहाँ धुवाँ धुलोले गर्दा कारको झ्याल खोलेर यात्रा गर्न सहज बनाएको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा कारमा भएको एयरकन्डिसन (एसी) को प्रयोग गर्नु राम्रो विकल्प हो । तर एसीको सही तरिकाले प्रयोग गर्न नजान्नाले केही अप्ठ्यारो भने हुन सक्छ ।
चर्काे गर्मीयाममा कारमा भएको एसी पर्याप्त नहुन सक्छ । आधुनिक कार निर्माताले कारमा अटोमेटिक एसी वा क्लाइमेट कन्ट्रोल जस्तै आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरेको हुन्छ । यसले गर्दा कहिलेकाही कारमा यात्रा गर्नेहरुले अप्ठेरोको सामना पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
उच्च तापक्रमको कारणले कार भित्रको तापक्रम पनि बढी हुने गर्छ । यही कारणले कारमा एसी चलाउँदा एसीको खासै प्रभाव परेको हुँदैन । एसी चलेको छ कि छैन भन्ने भान हुँदैन । केही सरल उपायबाट यस्तो अवस्थाबाट केही छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
१. झ्याल थोरै खोल्ने
बाहिरको तापक्रम बढेसँगै कार भित्रको तापक्रम पनि बढेको हुन्छ । यही कारणले गर्दा एसी खोल्दा कार भित्र अलि चिसो हुन समय लाग्छ । त्यसैले कार ड्राइभिङ गर्दा जहिले पनि कारको झ्याल थोरै खोलेको खण्डमा भित्रको तातो हावा छिट्टो बाहिर निस्कन्छ ।
२. कारलाई सित्तल ठाउँमा पार्किङ गर्नु
कारलाई गर्मीबाट बचाउनको लागि सरल उपाय भनेको कारलाई सितल ठाउँमा पार्किङ गर्नु हो । कार जहिले पनि सकेसम्म सितल ठाउँमा पार्किङ गर्नु पर्छ र पार्किङको समयमा थोरै कारको झ्याल खोलि राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले फ्रेस हावा कार भित्र प्रवेश गरेको हुन्छ र कारको तापक्रम केही हदसम्म कम हुन्छ ।
३. रिसक्र्युलेशन मोड
कार स्टार्ट गरेको समयमा जहिले पनि रिसक्र्युलेशन मोड अफ गर्नु पर्छ जसले गरम हावा भेन्टिलेशनबाट बाहिर निस्कन पाउछ र एकचोटी कार भित्र चिसो हावा आइसकेपछि रिसक्र्युलेशन मोड अन गर्नु जसले कार भित्र चिसो हावा आउछ । यस्तो स्थितिमा एसी चलाउँदा एसी प्रभावशाली ढंगबाट चलेको हुन्छ ।
कार र एसी दुबैको नियमित सर्भि्िसङ गराउनाले एसी सिस्टम राम्रोसँग चलेको हुन्छ । यदि कारको एसीमा कुनै प्रकारको समस्या देखिएमा सबैभन्दा पहिला उसको कम्प्रेसरको जाँच गराउनु पर्छ । गर्मी मौसममा जहिले पनि एसीको सर्भि्िसङ गराउनु पर्छ ।
५. एसीलाई कम गतिमा चलाउने
यदि कारमा अटो एसी वा क्लाइमेट कन्ट्रोल छ भने एसी सबभन्दा कम गतिमा चलाउनु पर्छ । यसले कार भित्रको तापक्रम तीव्र गतिमा कम हुन्छ । एक चोटी हावा चिसो भइसके पछि आफू अनुकुल तापक्रम बढाउन सकिन्छ ।
६. कार तीव्र गतिमा चलाउने
यदि कार लामो समयसम्म घाममा पार्किङ गर्नुभएको छ भने कार भित्रको तापक्रम बढ्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा कारलाई निश्चित दुरीसम्म कारलाई तीव्र गतिमा चलाउनु पर्छ । जब कारमा केही चिसो हावाको प्रवेश भएको महसुस हुन्छ तब सामान्य गतिमा ड्राइभ गर्दा हुन्छ ।
कौडीको भाउमा चिया बेच्दा मन रुन्छः चिया किसान
सानिमा बैंक र आईएमएस ग्रुपबीच ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौता
कुल संक्रमितमध्ये ०.२१ प्रतिशतको मृत्यु, ४१.५ प्रतिशत संक्रमणमुक्त
ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको अंश भेटिएपनि सर्दैन-स्वास्थ्य मन्त्रालय
आइतबार थपिए २९३ जना कोरोना संक्रमित
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण सुरु
उपत्यकामा संक्रमण बढेसंगै थप सतर्कता अपनाउन आग्रह
ओली सरकारको भविष्यको टुंगो आजै लाग्ने, प्रचण्ड कडा निर्णय लिने तयारीमा
विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी